Kaballi Fakkasaa meeshaalee fakkasaa guguddaa qabata.
Wantoota galmee ammee keessaa filuuf dandeessisa.
Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti rektaangilii guutame tokko fakkasa. Bakka xiyyoon rektaangiliichaa akka oolu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Garqixa tokko fakkasuuf, oggu'u harkistu, Shiftii dhiibi.
Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti luggee guutame tokko fakkasa. Bakka luggee itti fakkasuu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Geengoo tokko fakkasuuf, oggu'u harkistuu Shiftii dhiibi.
Galmee ammaa kee keessaa bakka ati cuqaasitti yk harkiistetti sanduuqa barruu tokko fakkasa. Galmicha keessaa bakka barbaadu cuqaasitii, kan booda barruu kee barreessi yk maxaansi.
Qonyoon sajoo kabala fakkasaa irra jiru sararawwan kamshaa bakka sararawwanii fi bocawwan islaayidii ammeetti idaatu bana.
Kamshaa Kornyoowwanii bakka kornyoowwan wantoota islaayidii ammee keessatti ida'uu dandessutti bana. Kornyoo sararaa wantoota kan walqunnamsiisa. Dabaltees yoo wantoonni socho'a waliin jalteessa kornyoo ni jalteeffama.
Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.
Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.
Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.
Kamshaa taattoo yaa'aa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.
Urjiilee fi Faajjiilee
Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.
Tuqaalee Fakkasaa keetirraa gulaaluuf si dandeessisa.
Wantoota filatamee gara qonyoo bezirtti jijjiri.
Boca yaadachiisa yookiin guutuu wanta(oota) filatamee fooyyeessa.
Hiriira Wantoota filamee fooyyessa.
Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.
Wantoota filamaniif galteewwan g-3 bana, dhaamsa.
Title is: Kabala Fakkasaa